Mogadishu Journal » 2019 » June » 7
Gudoomiye kuxigeen caawa lagu dilay Jowhar
Mjournal :-Wararka naga gaaraya magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in Kooxo hubeysan ay toogasho ku dileen Gudoomiye kuxigeenkii degaanka Gamboole. Ninka la dilay ayaa lagu Magacaabi jiray Cabdirashiid Xaaji Maxamed. Dilka ayaa dhacay Salaadii...
Qoyska Sarkaal maanta laga helay meydkiisa Muqdisho oo beeniyay inuu is daldalay
Mjournal :-Xaaskii sarkaal ka tirsanaa ciidamada Booliska Soomaaliyeed oo la sheegay in uu is dal-dalay ayaa beenisay in seygeedii uu is dilay iyadoo sheegtay in la diley. Deeqa Axmed oo ah xaaska sarkaalka la dilay ayaa sheegtay in xalay lasoo wacay oo loo sheegay in dhulka uu...
Mjournal :-Wararka la helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in Xerada Ciidamada ee Xaafada Sheelare oo ka tirsan degmada Xamar Jajab ee Gobolkan Banaadir uu isku daldalay Sarkaal ka tirsanaa Ciidanka Booliska Soomaaliyeed. Ilo xog-ogaal ah ayaa waxaa ay sheegeen in Sarkaalkaas oo lagu...
Mjournal :-Wararka laga helayo degmada Buulo Burde ee Gobolka Hiiraan ayaa waxaa ay ku waramayaan in Ciidamada Ammaanka Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen rag lagu eedeynayo kufsi loo geystay Gabar 9 Sano jir aheyd. Ciidamada ayaa Howlgallo waxa ay ka sameeyeen Xaafadaha Degmada...
Mjournal :-Maxkamad ku taalla Magalada Nairobi ee Caasimadda dalka Kenya ayaa waxaa Maanta la horkeenay Afar Ruux oo Soomaali ah oo uu ka mid yahay Aqoonyahan Ibraahim Bursaliid oo Arbacadii ay xireen Ciidamada Sirdoonka dalka Kenya. Dadkaan ayaa Kenya waxaa ay ku eedeysay inay...
Mjournal :-Gudodomiyaha Gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax iyo mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxaa ay kormeer ku tageen deegaanka Bariire ee Gobolkaasi Shabeellaha Hoose,halkaas oo dhawaan ay la wareegeen Ciidamo ka tirsan kuwa...
Mjournal :-Ra’iisul wasaaraha Ethiopia, Abiy Ahmed ayaa jimcaha Maanta ah booqan doona magaalada Khartoum si uu u dhex-daadiyo hogaamiyayaasha milatariga haya talada dalka Sudan iyo isbahaysiga kooxaha dibad-baxayaasha, sida ay sheegeen ilo-wareedyo ka tirsan safaaradda Ethiopia...